Fitaovana terminal EOC mahaleo tena. HomePlug AV / IEEE 1901 teknolojia, mandray ny Qualcomm AR7411 puce, mampiasa fantsom-pandrefesana ambany ambany 65MHz, ary miara-miasa amin'ny fitaovana EC head-end series EOC mba hahatsapany ny fampitana ireo signal data Ethernet amin'ny tamba-jotra fizarana coaxial. Fampiasana WIFI tsy voatery. Endri-javatra vokatra 1. Ny fikirakirana modely natambatra ho an'ny birao foibe dia voateraka, ary plug ary milalao ny fitaovana. 2.Manomeza 1 CABLE fangaro fangaro fampidirana seranan-tsambo RF sy fivoahan'ny signal TV 1 RF p ...
1.Ny laser pump amin'ny alàlan'ny modely optika sy ny fibre er-doped dia ampidirina avy any Etazonia. 2.Ny masinina dia misy famokarana herinaratra optika tonga lafatra sy azo antoka, mandrindra ny fizaran-tany sy ny laser thermoelectric cooler control circuit miantoka ny fahombiazan'ny milina iray manontolo sy ny fiainana maharitra maharitra an'ny laser 3.Ny masinina dia manana rindrambaiko mikroprocessor namboarina, miaraka fanaraha-maso fanjakana tamin'ny laser, fampirantiana dizitaly, fampitandremana ny lesoka, fitantanana tambajotra ary asa hafa. Raha vantany vao miasa ny para ...